တိုးတက်ပြောင်းလဲမယ့်သူရဲ့ အကျင့်ဆိုတာ – Live the Dream
ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ခရီးသည် ဝန်ဆောင်မှု
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား
အာဟာရ အစားအစာ နှင့် မုန့်လုပ်ငန်း
ရုပ်ရှင် TV ပြဇာတ်
ရုပ်ရှင် TV နှင့် ပြဇာတ်
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ ,ဆောင်းပါးများ ,ဘဝ
ဟေ့ သူငယ်ချင်း မင်းဘာတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီလဲကွ? ကဲ ဘယ်လို အဖြေပေးကြမလဲ ” ဒီလိုပါပဲကွာ အရင်းအတိုင်းပဲ..” အဲ့လိုလေးမဖြေချင်ပေမဲ့ ဖြေလိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေက ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဝမ်းနည်းစရာသိပ်ကောင်းတယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ်… အရွေ့တစ်ခု ၊ အပြောင်းအလဲတစ်ခု က တကယ့်ကို ခံစားလို့ကောင်းမယ်ဆိုတာ တကယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ ကြိုတွေးရုံနဲ့တင် ကြည်နူးမှု ရနေတဲ့အရာတစ်ခု။ လူတိုင်းလိုချင်ကြတာတော့သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ဒီအရာက ဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲလိုက်လဲ?? တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရဖို့ တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဖြိုမယ်လဲမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲကြည့်ပါ၊ တိုးတက်မှုဆီသွားနေတာမှန်နေပေမဲ့ ဝေဖန် အပြစ်တင်မှုတွေက အဖက်ဖက်ပဲလေ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို လူတွေ ခက်ခဲမယ်၊ အရမ်းလုပ်ရမယ်လို့ ထင်နေတာလည်း မဆန်းသေးဘူး။ ဆန်းတာလေးတစ်ခုက လူတွေက တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာ… လိုချင်တဲ့ အရာတစ်ခုက ခက်ခဲမယ်ဆိုလည်းရအောင်ယူရမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကို အကြီးကြီးမပြောကြပဲ “မနေ့က ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုးရွားနေတဲ့အခြေအနေ ကို ဒီနေ့ပြုပြင်ဖို့” ဆိုပြီးအခြေခံကျကျလေးပြောကြရအောင်။ ဒီလောက်အခြေခံကျတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ဘာကြောင့်ခက်နေရလဲ သိချင်ကြပြီမလား?? တကယ်တော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပဲ… ကိုယ့် နေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေက နှောင့်ယှက်နေလို့ပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမရိုးအောင် ကျင့်သုံးနေတဲ့ အကျင့်ဆိုးသေးသေးလေးတွေကို ပြင်ပြီးမှ ကိုယ့်ဘဝပြောင်းလဲဖို့ ဦးတည် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျင့်တွေထဲက ကိုယ့်သိနေတာလည်း ပါချင်ပါနိုင်ပါတယ်။ သိပေမဲ့လည်း သတိမထားရင်မဖြစ်ပေဘူးမလား။ အချိန်တွေသာ အလီလီ ပြောင်းလဲပေမဲ့ ဒီဘဝလေး ဒီအခြေအနေလေးမှာပဲ ရပ်နေတာကြာနေပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကို Review ပြန်လုပ်ရတော့မယ်။ ကဲ့ ဘာအကျင့်တွေကို သတိထားသင့်လဲ?? ဘယ်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အတူတူ ဖတ်ကြည့်ကြစို့နော်.။
တစ်ချို့လူတွေ ငါပြောင်းလဲချင်ပြီကွာ သာထိုင်အော်နေကျတာ Comfort Zone ထဲကမထွက်ချင်ကြဘူး။ ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?? ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ??ဆိုတာကို လိုက်မရှာဘူး၊ ဖောက်ထွက်ဖို့ကို မရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပုံမှန်ဘဝတွေကို ခုံမင်နေကြတုန်းပဲ။ ဒါက အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဖုန်းလေး တစ်လုံးရှိတယ် နေ့တိုင်းလည်း ထမင်းစားနေရတယ် ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေနေကြပြီလို့ ထင်နေရင်တော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုလိုချင်လိုက်တာ ဆိုပြီး ထိုင်မျှော်နေရဦးမှာပါ။ ပြောင်းလဲမှုက ဘုန်းခနဲကျမလားဘူး.? ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ဆောက်ရမှာ။ အဲ့လိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့က နည်းလမ်းတွေကို ကြိုးစားရှာရမှာ။ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံအနေနဲ့ အရွေ့တစ်ခုကို သွားနေပြီး။ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်း ပွင့်လင်းလာနေပြီ၊ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာနေပြီ။ မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေလည်း ဝင်ငွေကောင်းတစ်ခုဆီ ကို ပြန်ပြီး ရပ်တည်လာနိုင်ပြီး။ Resource တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီး။ ဒါတွေကို သိသူတွေက ဖော်စားနေကြပြီလေ။ ကျော်သွားချင်တဲ့သူက လူမိုက်ထက်မိုက်တဲ့ လူမိုက်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဖော်စားချင်ရင် သိအောင်လုပ်ဖို့လိုနေပြီ။ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ တစ်ဆင့်ချင်းတက်ရမယ့်အရာတွေကို သိအောင်မှ မလုပ်ရင် ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ ဖြစ်နေမှာပါ.ကဲ “သိအောင်အားမထုတ်” တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးကို ပြင်နိုင်ကြပြီး အမြင့်ဆီရောက်နိုင်ဖို့ တက်ရမယ့်လမ်းတွေကို တွေ့နိုင်ကြပါစေဗျာ.
တစ်ခါတစ်လေ ထူးဆန်းတာတစ်ခုက သိရဲ့သားနဲ့မလုပ်တာ။ တကယ့်ကောင်းမွန်ပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ လုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကို သိတယ်။ ဘာတွေလုပ်ရင်တော့ တိုးတက်မယ်၊ ပြောင်းလဲမယ် သိတယ်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရုံတင်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ချိဖ၊ ချိမတွေကိုအကြံပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ပြဿနာက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တာ။ အမိုက်စနစ်တကျပစ်ရင် သန့်ရှင်းလိမ့်မှာကို သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ စနစ်တကျ အမိုက်ပစ်တဲ့သူထဲမှာ ကိုယ်မပါသေးဘူး ဆိုရင်တော့ ညစ်ပတ်တဲ့ နေရာဒေသမှာပဲ နေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဥပမာသေးသေးလေးတစ်ခုပါ။ ပြောင်းလဲဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်လိုက်ပါ။ ပြောင်းလဲတာကို ထိုင်စောင့်နေလို့ ကိုယ့် ဆီကို တံခါးခေါက်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ သိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေက လက်တွေ့မလုပ်ရင် ဘာထူမှာလဲနော်.စာအုပ်ထဲမှာပဲ ချရေးထားလို့မရဘူး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှ။ ဒီလို“သိသားပဲ မလုပ်တာ”ဆိုတဲ့ ခပ်ချေချေ အကျင့်တွေရှိနေရင်တော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ကဝေးနေဦးမှာ။ ကဲ ဘာလုပ်ကြမှာလဲဗျို့ ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်မလား ဆက်မွေးထားမလား…
၃။ နည်းမှန် လမ်းမှန်
ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယ အပြည့်လုပ်တယ်။ မနားမနေကြိုးစားလုပ်ဆောင်တယ် ။ ဘာလို့မတိုးတက်တာလဲ?? နေ့တိုင်း Workout လုပ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေက အာလူးလောက်ပဲဖြစ်နေသေးတာလဲ?? အဖြေကရှင်းတယ် နည်းမမှန်လို့ပေါ့။ နည်းလမ်းမှားနေတာ သိရဲ့ သားနဲ့ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာနဲ့ အဝေးကြီးပါ။ လမ်းကြောင်းတည့်မှ လမ်းကြောင်းမှန်မှ တိုးတက်အောင်မြင်မှုရတာ။ ဒီနေရာမှာ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ သွားချင်ရင်လည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့လမ်းမှန်သွားတဲ့သူလောက် အခြေဘယ်ခိုင်မှာလဲ။ ကြိုးစားနေပါလျက်နဲ့ နည်းလမ်းကျတာကိုမသိဘူး ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ။ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုထိရောက်ဖို့ ဆိုတာက လမ်းဟောင်းမှာ လည်မနေပဲ ကိုယ့်ထက်ဝါရင့်သဘာရင့် ဆရာကြီး၊ သမားကြီး တွေဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး နည်းနာယူသင့်တယ်လေ။ လမ်းမှားကြီးပေါ်ရောက်နေရင် ရောက်တဲ့နေရာက နေ လမ်းမှန်ရှာလိုက်ပါတော့ကွယ်…
၄။ ဆင်ခြေ ဆင်လက်
ဆင်ခြေတွေ အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကို တော်လှပြီ ကိုယ့်အပြစ်လွှတ်ပြီပဲထင်နေကြတာ။ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိတာလည်း ဘာကြောင့် ညာကြောင့်ဆိုပြီး တခြားသူအပေါ် တခြားသော အကြောင်းအရာတွေအပေါ် အပြစ်တင်လိုက်ရမှ။ ဒါပေမဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးလူက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို့၊ မိဘတွေချူချာလို့၊ ကျောင်းကတောကျောင်းမိုလို့၊ အသက်ကြီးသွားလို့ အာရုံမစိုက်နိုင်တော့တာ။ ဒီလို ဆင်ခြေတွေက အကောင်းဆုံးလို့ ထင်နေကြတာလား။ တကယ်တန်းတိုးတက်ချင်ရင် ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ မတွေ့တွေ့အောင်ရှာရမယ်လေ။ ဆင်ခြေ အမျိုးပေါင်း တစ်သောင်ကျော်ကို ပိုက်ပြီး ဘဝတိုးတက်ဖို့ ခြေလှမ်းစမလှမ်းသေးရင် တစ်ဖြည်းဖြည်း အိုကြီး အိုမ တွေဖြစ်လာတော့မယ်လေ။ ဆင်ခြေပေးတာလျှော့ပြီး ရရာနေရာကို ရှာဖွေပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါဗျာ..
၅။ လဲရင် ပြန်ထ
လုပ်နေရင်း အခက်အခဲနဲ့ကြုံရင် လဲကျသွားတာကသဘာဝပါ။ ဒါကို အကြီးကြီးခံစားပြီး ဟန်ဆောင်နေတာတွေရပ်ဖို့သင့်နေပါပြီ။ ဒုက္ခဆိုတာ လာမှာက ကျိန်းသေပေါက်. ဒါတွေအတွက် အချိန်အများကြီးပေးပြီး ပြန်မထပဲ အချိန်ဆွဲနေတာမျိုးတွေရပ်တန့်သင့်နေပါပြီ။ မြန်မြန်လေး နိုးထဖို့ကောင်းနေပါပြီ . အဆင်မပြေမှုတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်လေးဖြေရှင်းသွားရမယ်လေ။ ချက်ချင်းလုပ် ချက်ချင်းရရအောင် တိုးတက်မှုဆိုတာ ရွှေဘုံသာအလယ်လမ်းက ယူနိုက်တက် ဗွီးရှင်းမျက်မှန်ဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ခလုတ်တိုက်ရုံလေးနဲ့ တစ်ခါထဲ အလဲထိုင်လို့မရဘူး ချက်ချင်းပြန်ထရမှာ။ အချိန်ဆိုတာ တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ လူတိုင်းအတူတူရကြတာပါ။ ၂၄ နာရီမလောက်လို့ ကိုယ်တွေထက် အဆများစွာချမ်းသာနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးသားတွေက အိပ်ရေးပျက်ခံ အလုပ်လုပ်နေကြပြီ။ သူတို့အရည်အသွေးတွေ မြင့်မားလာပြီး နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေအများကြီးထွက်လို့။ ကိုယ့်က အသေးအမွှားကိစ္စလေးကို စိတ်ပျက်လို့ လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ်ဝမ်းနည်းစရာပဲနော် ။ ချော်လဲရောထိုင် တာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့။
ကိုယ်ရှိမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ခြေလှမ်းမလှမ်းရဲပဲ နောက်ဆံတင်းရတာတွေက တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ ကျားကန်ဆွဲထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲချင်သူ များအနေနဲ့ တစ်ချို့သောအရာတွေကို စွန့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာတော်တဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ချင်ရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို အလေးထားနောက်ဆံတင်းနေလို့မရဘူး။ မြို့ပေါ်တက်ပြီ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ကျေးရွာ၊ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကို ထားရစ်ခဲ့ရမှာတော့အမှန်ပဲ။ Career Changing အမှန်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်အခု ရှိနေတဲ့ အလုပ်၊ အခုကိုယ့်ရတဲ့ဝင်ငွေ ဒါတွေကို နှမြောတသ ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ အရွေ့တစ်ခုကို ဆွဲထားတဲ့ သေးသေးမွှားမွှားအရာတွေအတွက် ပြတ်သားဖို့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ မပြတ်သားမိခဲတဲ့နေ့ရက်တွေအတွက် အသက်တွေကြီး အချိန်တွေမရှိမှ နောင်တရနေပါလိမ့်မယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတိုင်းအတွက် ကိုယ့်ကို ကို စိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ နောက်ဆံတင်းမှုအစား ရှေ့တက်ဖို့ သတ္တိမွေးလိုက်ပါနော်။